I-Semalt: Amathuluzi we-SEO Anamandla Kakhulu Ebhizinisi
Ukuncintisana emakethe ye-e-commerce kuya kukhula, futhi nezinkampani ezinamandla kakhulu kufanele, ngezikhathi ezithile, ziqaphele ukuthandwa kwazo kwi-Intanethi.
Ngakho-ke, kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo ochwepheshe abaqhuba amawebhusayithi ezinkampani ezinkulu, kanye nama-blog we-novice asanda kuqala ukuheha abafundi abasha.
Noma ngabe usuvele uchwepheshe noma usuqalile, izimbangi zakho ngeke zilinde. Ngakho-ke, yiba ngowokuqala ukuthuthukisa isikhundla sakho ku-Intanethi: I-SEO ibalulekile kuwe!
Ngempela, i-SEO inqubo eyinkimbinkimbi edinga ukusetshenziswa kwamathuluzi angeziwe. Eminyakeni embalwa edlule, uSemalt ubeke amathuluzi okuhlaziya amahle kakhulu ukuthuthukisa amasu afanele e-SEO ezinkampani zakho. Ikusasa seliseduze. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi iwebhusayithi yakho inesikhundla esiphambili kuyo namuhla.
Thola lapha amathuluzi wokuhlaziya weSemalt afanele namasu azokusiza ukukhuthaza iwebhusayithi yakho ezinjini zokucinga eziphezulu: I-SERP - OKUQUKETHWE - I-GOOGLE WEBMASTERS - IPHEPHA KWAKHULULWA
I-SERP (Ikhasi Lomphumela Wenjini Yokusesha)
Isigaba se-SERP sifaka amathuluzi wokuhlaziywa kwewebhusayithi okuqondayo. Thola amagama agqamile i-webhusayithi yakho aqonde kuwo, thola amakhasi wakho wokushayela ngethrafikhi, bese uthola isikhundla sawo emiphumeleni yokusesha ye-organic Hlola amamethrikhi emiqhudelwano yakho ukwakha isu eliphumelelayo lokunyusa.
Amagama agqamile ku-TOP
Lo mbiko ukhombisa wonke amagama asemqoka lapho iwebhusayithi yakho ihlela khona emiphumeleni yokusesha ye-Google, amakhasi abekwe ezikhundleni, kanye nezikhundla zawo ze-SERP zegama elingukhiye elithile.
Faka phakathi izizinda ezingaphansi: ungahlaziya isizinda sakho esiyinhloko nemikhawulo engezansi noma uyikhiphe ukuze uthole idatha yesizinda esiyinhloko kuphela.
Injini yokusesha : Lezi izinjini zokucinga esevele zibeke iwebhusayithi yakho okungenani ngegama elilodwa elingukhiye. Uhlu luhlelwe ngokuhla kwe-oda lenombolo yamagama angukhiye.
Inani lamagama agqamile ku-TOP: Kulesi sigaba, uzoba neshadi elibonisa inani lamagama angukhiye ku-TOP ngokuhamba kwesikhathi. Kukusiza ukubheka ushintsho kwinombolo yamagama angukhiye isayithi eliwahlela emiphumeleni yokucinga ye-organic yeGoogle TOP 1-100.
Ukusatshalaliswa kwamagama agqamile nge-TOP: Lapha, ungathola inombolo yamagama asemqoka isayithi eliwaqoqayo kwimiphumela yokucinga ye-Google TOP -1-100, ngokungafani nosuku lwangaphambilini.
Usezingeni ngamagama agqamile: nansi itafula elibonisa amagama angukhiye athandwa kakhulu amakhasi amakhasi wewebhusayithi emiphumeleni yokucinga ye-Google. Ungathola izikhundla zabo ze-SERP ngezinsuku ezikhethiwe nokuthi bashintshe kanjani, ngokungafani nesikhathi esedlule.
Unethuba lokuhlunga idatha etafuleni ngezindlela ezahlukahlukene:
Igama elingukhiye noma ingxenye yalo
I-URL noma ingxenye yayo
Isibonelo, ungahlunga wonke amakhasi afaka igama elingukhiye eliqukethe igama elithi '' thenga '' futhi ube nezikhundla ze-TOP-1 kwimiphumela yokusesha ye-organic.
Leli thebula libonisa futhi:
Amagama angukhiye i-webhusayithi afaka kuwo emiphumeleni yokusesha ye-Google
I-URL yamakhasi abekwe kuwebhusayithi yakho nezikhundla zawo ze-SERP zegama elingukhiye elithile.
Isikhundla sekhasi lewebhu ku-Google TOP segama elingukhiye eliqondisiwe ngosuku olubekiwe.
Inani eliphakathi nendawo lokusesha kwegama elingukhiye lezinjini zokusesha zeGoogle.
Amakhasi Kuhle kakhulu
Kulesi sigaba, uzothola amakhasi aqhuba isabelo esikhulu kakhulu se-organic kuwebhusayithi yakho. Naka kakhulu kubo: lungisa amaphutha abo e-SEO asekhasini, engeza okuqukethwe okungafani nalokhu, futhi ugqugquzele lawa makhasi ukuthola ithrafikhi ethe xaxa kusesho lwe-Google. Ngaphakathi kwalokhu, umphumela uzokukhombisa:
Amakhasi amahle ngokuhamba kwesikhathi: uzothola ishadi elibonisa ushintsho enanini lamakhasi e-webhusayithi kuGoogle TOP kuwo wonke umjikelezo wempilo yephrojekthi. Bese ushintsha esikalini, ungabuka idatha isonto noma inyanga.
Umehluko: lapha, ungathola inombolo yamakhasi amawebhusayithi ku-Google TOP 1-100 imiphumela yokusesha ye-organic, ngokungafani nosuku lwangaphambilini.
Izibalo ezikhethekile zamakhasi akhethiwe: lapha, ishadi libonisa ushintsho kunombolo yamagama angukhiye amakhasi akhethwe kuwo kuGoogle TOP kuwo wonke umjikelezo wempilo yephrojekthi.
Kulesi sigaba, uzothola wonke amawebhusayithi aqalwa kuGoogle TOP 1-100 amagama angukhiye afana nalawo amawebhusayithi akho wewebhusayithi. Thola ukuthi yisiphi isikhundla iwebhusayithi yakho ebambe phakathi kwabaqhudelana bakho ngenombolo yawo wonke amagama angukhiye ku-TOP-100
Funda uma iGoogle iphatha ikhasi lakho lewebhu njengomthombo ohlukile noma cha. Lapha uzokwazi ukuhlola iphesenti eliqondile lokungafani kokuqukethwe kwakho, uthole ukuthi iziphi izingxenye zombhalo ezichazwe, bese ubheka emithonjeni eyinhloko.
Ukuhlolwa kwekhasi okuhlukile
Thola ukuthi iGoogle iphatha ikhasi lakho lewebhu njengehlukile noma cha. Noma ngabe uqinisekile ukuthi okuqukethwe kwakho kuhlukile, kungenzeka ukuthi kukopelwe ngomunye umuntu. Futhi uma elinye ikhasi lewebhu elinokuqukethwe kwakho lizokhonjwa maduze kunelakho, i-Google izoyithatha njengomthombo wokuqukethwe, kanti ikhasi lakho lewebhu lizobhalwe ukuthi libhaliwe. Khumbula ukuthi iphesenti elikhulu lokuphinda kabili lewebhu lewebhu lingaholela ezinhlawulweni zakwaGoogle.
Inhloso eyinhloko yokuhlola ikhasi ngobunye bekhasi
Inhloso eyinhloko yensizakalo yokuhlola ubumbano lekhasi ukubona ukuthi okuqukethwe kuntshontshwe yilabo bancintisana nabo, ukuloba kungaya, futhi isayithi lakho lizoba impinda bese ungalokothi uthathe isikhundla esiphakeme.
Ukuqinisekiswa kwenzeka ngezinyathelo ezintathu ezincane. Okokuqala, ukhombisa ikheli lendawo, esigabeni se-URL, bese ukhombisa ukuthi ngabe ufuna ukwenza ukuqinisekiswa kwakho emhlabeni jikelele (google.com (All) - International) noma kuwebhu yaseFrance kuphela (google.fr (French) - France), futhi manje uvula ukuqinisekiswa ngokucindezela inkinobho eluhlaza CHECK. Sizokuskena futhi sikhombise zonke izigaba.
Ngemuva kwalokho, ungabheka noma yisiphi isigaba ngokuchofoza okukodwa!
Injini yokusesha cishe ibheka leli khasi njengehlukile. Izikhundla zewebhu zingakhula zingaphazamiseki ku-SERP.
Injini yokusesha kungenzeka ibheke okuqukethwe kuleli khasi kabusha. Izikhundla zewebhu zingakhula noma, okungenani, ngeke ziwohloke. Ukukhuthaza ikhasi lakho le-web, dala okuqukethwe okungafani nalutho futhi okuwusizo.
Injini yokusesha kungenzeka ukuthi ibheka okuqukethwe kuleli khasi njengokuqamba amanga. Ukukhula kwesikhundla akunakwenzeka. Kufanele ushintshe okuqukethwe kwakho kwamanje ngokuhlukile.
Ngemuva kwazo zonke lezo zingxenye, ungabona futhi emiphumeleni yakho izingxenye ezimbili eziyinhloko, okungukuthi:
Okuqukethwe: Lapha, ungathola konke okuqukethwe kombhalo okubonwa yiGooglebp ekhasini lewebhu elinikeziwe. Izingxenye eziphindwe kabili zokuqukethwe ziyaqokonyiswa.
Umthombo wokuqukethwe woqobo: Lapha, amawebhusayithi aphathwa yiGoogle njengemithombo eyinhloko yokuqukethwe enikeziwe kuhlu kuleli thebula. Ngemuva kwalokho, ungabheka ukuthi iyiphi ingxenye yokuqukethwe etholakala kuleyo naleyo webhusayithi.
Qaphela ukuthi ungahlangana nethimba likaSemalt nganoma yimiphi imibuzo mayelana nekhambi lobumbano lwewebhusayithi yakho.
Phatha amawebhusayithi amaningi usebenzisa isikhombimsebenzisi esisebenziseka kalula. Thumela izizinda zakho noma ama-URL athile ku-Google bese ulandelela ukusebenza kwawo kalula. Qiniseka ukuthi udala i-akhawunti yakwaGoogle ukuthola ukufinyelela esigabeni se-Google Webmasters.
Umphathi wewebhusayithi we-Google insizakalo ekhombisa ukuthi iwebhusayithi yakho ivela kanjani emiphumeleni yokucinga ye-Google futhi ikusize ekuboneni izingqinamba zenkomba. Kuleli khasi lewebhu, ungahambisa amawebhusayithi akho nama-sitemaps njengohlu lonke futhi ucele ukukhonjiswa kwawo yi-Google.
Impahla iqukethe: Hlunga imiphumela nge-URL noma ingxenye yayo. Ungathola ama-URL aqukethe noma angaqukethe igama elithile kanye nokufana kwe-URL.
Lezi zinsimbi zibonisa ukuthi iwebhusayithi yakho isebenza kanjani. Ungazibheka isikhathi sosuku / isikhathi esithile bese uqhathanisa imininingwane. Le nsizakalo isiza ukukhomba amandla wewebhusayithi yakho kanye namaphutha ayivimba ukuthi ibekwe ku-TOP 1
Kulesi bhulokhi, ungahambisa izithonjana zewebhusayithi yakho ku-Google ukubona ukuthi iziphi izithombisi ezikhonjisiwe nokuthi iziphi ezinamaphutha. Khetha isizinda ukubuka uhlu lwamamephu.
Hlola ukuthi umthwalo wekhasi lakho lewebhu uhlangabezana nezidingo ze-Google. Lapha uzonikezwa imininingwane ngamaphutha akhona okufanele alungiswe kanye nezeluleko zokuthi ungawenza kanjani umsebenzi wakho omuhle wesayithi.
Kungani ijubane lesiza libalulekile?
Ijubane lapho iwebhusayithi ilayisha khona iyinto esezingeni elifanele. Isikhathi eside sokulayisha sithinta kabi isikhundla kwimiphumela. I-Yandex ne-Google bakhetha izinsiza ezisheshayo.
Isikhathi sokulayisha esifanele yimizuzwana eyi-2-3. Okufanele - Isikhathi sokuphendula somsebenzisi yimizuzwana engu-0.5.
Namuhla, izithameli eziningi eziku-inthanethi zisebenzisa amadivaysi eselula ukuvakashela amasayithi. Futhi baneziteshi zokufinyelela ezihamba kancane nezinsizakusebenza zangaphakathi kunamakhompiyutha abantu.
Wonke umuntu uyazi ukuthi isayithi elihamba kancane libi. Uma isiza sincipha ngezikhathi ezithile, izivakashi zinezinkinga ezinkulu zokuxazulula imisebenzi yazo, futhi ngaphezu kwalokho, kuyacasula nje.
Kodwa noma ngabe isimo esinemithombo yewebhu siyinto evamile, ukubambezeleka okuncane ekuboniseni isayithi kuphumela ekulahlekelweni kwabalaleli kanye nokwehla kwezinga lokuguqulwa.
Ochwepheshe bezitolo eziku-inthanethi bathole ukuthi uma ijubane lokulanda lehla ngo-100 ms, ukuthengisa kwabo kwehle ngokushesha nge-1%.
Ngakho-ke, inkinga yesivinini sokulayisha isiza idinga ukuxazululwa ngokushesha ezindaweni eziningi.
Futhi ngesizathu esihle, uSemalt usungule leli thuluzi lokuhlaziya isivinini sekhasi ukuze ahlaziye wonke amapharamitha aqondene nesivinini sendawo namakhasi athile: Thola ukuthi lisebenza kanjani.
Ukuhlaziywa kwejubane lekhasi
Kusetshenziswa isihlaziyi sejubane lekhasi ukubona ukuthi isikhathi somthwalo sekhasi lakho le-inthanethi siyahlangabezana yini nezidingo zezinjini zokusesha zeGoogle. Ibuye ikhombe amaphutha okumele alungiswe futhi iza nokuthuthuka okungenziwa ukuze kusebenze isikhathi sakho sokulayisha ikhasi lewebhu.
Ngemuva kokuhlaziywa, uthola hhayi umbiko wenguqulo yekhompyutha kuphela, kepha futhi nohlobo lweselula.
Ngomphumela ngamunye, uzobona:
Isikhathi sokulayisha ikhasi: inani lesikhathi esithathayo sekhasi ukuthi lisebenzisane ngokugcwele.
Ukuhlolwa okuphumelelayo: Inani lokucwaningwa ikhasi lakho lewebhu lidlule ngempumelelo.
Amaphutha ukuwalungisa: Ukulungisa la maphutha kuzosiza ikhasi lakho le-web ukulayisha ngokushesha
NgoSemalt, ungacela futhi ukubonisana mahhala futhi uthole ukuthi ungayithuthukisa kanjani iwebhusayithi yakho: